Mikorontana ny baolina kitra any Indonezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Avrily 2011 18:20 GMT
Mbola miteraka resabe ny baolina kitra any Indonezia. Voalohany, nisy ny fihetsiketsehana ho fanoherana ny nanendrena an'i Nurdin Halid ho eo amin'ny toeran'ny tompon'andraikitra hitantana ny PSSI ((Fikambanan'ny Baolina Kitra any Indonezia). Avy eo nisy koa ny gidragidra ka voatery najanona ny fihaonam-be an'ny PSSI tany Penkabaru. Fa ny tena olana goavana dia ny fahamehana tamin'ny fanonganana ny ligin'ny baolina kitra tamin'ny volana janoary: (ligin'ny diviziona voalohany) na ny IPL.
Nanana vina hampiakarana ny baolina kitra any Indonezia ho matihanina kokoa sy hahaleo tena ny IPL. Tsy nitadiavany vola avy amin'ny fanjakana izany.
Mpanohana ny ekipa baolina kitra Indoneziana, Persiba Bantul. Sary mpisera Flickr Paserbumi Bantul (CC BY-NC-SA 2.0).
Nankatoavin'ny PSSI ny ligy faratampon'ny baolina kitra (ISL) any an-toerana fa notsipahany kosa ny IPL. Nofoanany ny fandraisana anjaran'ireo ekipa telo goavana izay tohanan'ny IPL. Napetraka koa ny sazy ho an'izay ekipa nandray anjara tamin'ny fifaninanana nokarakarain'ny IPL.
Ny tena mahafaly anefa, nankatoavin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andi Malarangeng ity fifaninanana nokarakarain'ny IPL ity ary nilaza izy fa tsy nandika lalàna na fitsipika ny IPL. Izany no nahafahan'ny IPL nanohy ny fifaninanana ; ary tamin'ny farany dia nanome alàlana ny IPL koa na dia ny polisy aza.
Inona no hevitry ny vahoaka indoneziana manoloana izao ady seza manodidina ny resaka baolina kitra sy ny mpitarika azy izao?
Catatanbujangan blog mampahatsiahy ny PSSI fa tsy mbola nahazo medaly tamin'ny fifaninanana iraisampirenena mihitsy i Indonezia hatramin'izay:
“Hatramin'ny taona 1991 ka hatramin'izao dia mbola tsy nahazo fandresena mihitsy ny ekipa Indoneziana. Tsy nisy medaly volamena azo, eny fa na dia nandritra ny Tiger Cup izay novana ho ASEAN Football Federation (Federasionan'ny baolina kitra any Azia) aza, tsy mbola tompondaka izany mihitsy isika.”
Ilay bilaogera “Pustaka Langit Biru” aza dia niteny fa mandalo fotoan-tsarotra tokoa izao ny PSSI.
Ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andi Malarangeng, nanajanona ny asa rehetra tokony hataon'ny PSSI ary mazava ho azy fa tsy omen'ny fanjakana koa izany ny vola tokony hampiasainy. Noho izany, namadika ny famelezany ho any amin'ny minisitra indray i Nurdin Halid ary nilaza izy fa tokony hiala amin'ny toerany ity minisitra ity.
Gresnews football nilaza fa ho re manerantany ity zava-misy ity:
Ao amin'ny andalana nosoratana tao amin'ny ESPORT. com, Jesse Fink mihevitra fa tsara raha manome tànana amin'ny fankatoavana ny ekipa indoneziana ny FIFA. Araka ny heviny, dingana iray izao hanavotana ny baolina kitra any Indonezia.
Ary ao amin'ny Yahoo Answers, misy manontany:
Nahoana no ambany be ery ny vokatra azon'ny ekipa any Indonezia kanefa tena malaza be ity taranja ity any an-toerana?
Mpiserasera ao amin'ny twitter Slamet Nurul Anwar manome soson-kevitra ny amin'ny tokony hiarahan'ny IPL sy ny PSSI miasa hampiakarana ny lanjan'ny baolina kitra any Indonezia:
Tokony hiara-dalana ny IPL sy ny PSSI fa tsy hifanohitra. Mampalahelo ireo mpijery ny tsy fahitany ny ekipa nasionaly miaraka amin'ireo mpilalao mahay ka afaka manome endri-dalao tena tsara hojereny.
Ilay bilaogera Multibrand manakiana ny tompon'andraikitry ny baolina kitra any an-toerana
Raha ny mpitarika tsy matotra ao amin'ny PSSI ankehitriny no antenaina, dia sarotra ny hino fa hihatsara ny zava-bitan'ny ekipa ka hihoatra izay efa lasa izay.